ဒေါက်ဇော်ကတော့ ပြောတဲ့အတိုင်း တကယ်ဆော်ပြီနော်၊ ကောင်းစေချင်လို့ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါ – White Sone
ဒေါက်ဇော်ကတော့ ပြောတဲ့အတိုင်း တကယ်ဆော်ပြီနော်.. ကောင်းစေချင်လို့ဆိုတာကို သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်..
မန္တလေးတစ်ခရိုင်လုံး Stay at Home တစ်အိမ်တစ်ယောက်သာ စျေးဝယ်ထွက်ရန် ကဒ်ပြားနှင့်တကွ ထွက်ပါ (ယာဥ်မောင်းပါခွင့်ရှိ) ဆေးရုံ / ဆေးခန်း သွားလိုလျှင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အကြောင်းကြားခွင့်ပန်ပါ.. မဖြစ်မနေ ဖွင့်လှစ်ရမည့် အစိုးရရုံးဝန်ထမ်း၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ ဝန်ထမ်းကဒ် ပြနိုင်ရမည်..
မိမိမြို့နယ်အတွင်းရှိ စျေးတွင်သာ ဝယ်ယူရန်.. မြို့နယ်အားလုံး ညီရန် လိုပါသည်.. Mobile team (၄) ဖွဲ့ ဖွဲ့၍ ပတ်ကားဖြင့် ပတ်နေပါမည် ။ (ချမ်းစံ စီစဥ်ထားမှု့).. လမ်းပေါ်တွင် တွေ့သမျှ မည်သူမဆို ရှောင်တခင်မေးမြန်းစစ်ဆေး၍… ၁။ အဘယ့်ကြောင့် လမ်းပေါ်တွင် ရှိနေသနည်း ?
၂။ ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အလုပ်ချိန်အတွင်း မိမိရုံးတွင် မရှိဘဲ အဘယ်ကြောင့် လမ်းပေါ်တွင် ရောက်နေပါသနည်း..? ဝန်ထမ်းကဒ်ပြခိုင်းမည် ။ အကြောင်းပြချက်ပေးခိုင်းမည် – (ဥပမာပြောခြင်း) အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံသော်လည်း Mask မတပ်ပါက ဒဏ်ငွေ ရိုက်ပါမည်.. ငွေမပါက Q center များသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ခိုင်းမည် (Social Punishment) ရပ်ကွက်တိုင်းတွင် ကိုဗစ် ကာကွယ်ထိမ်းချုပ်ရေး ဒေသန္တရ အမိန့်များကိုသာမက ရပ်ကွက်အလိုက် ဖြစ်ပွားမှု့ အခြေအနေကို အသိပေးကြေငြာမည်..
ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်ထိ လုပ်လာရသလဲဆိုလျင်.. အရာရာကိုလွယ်လွယ်တွေး၍ လွယ်လွယ်လုပ်တတ်သော အကျင့်ရှိသူတို့ကြောင့် မ​သေသင့်ဘဲ သေရသူ၊ ပိုးကူးစက်ခံရသူတို့ ရှိလာပြီး အခြားသော တာဝန်ရှိသူများ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပင်ပန်းလာကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုဗစ််-၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု့ကို ထိမ်းချုပ်ရန်မှာ ပြည်သူတရပ်လုံး တာဝန်ဖြစ်၍ ယခုအချိန်မှ စတင်ပြီး စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာ ကြပါရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းပါသည်..
Dr Lin Lin Chit